Xiddig Ka Tirsan Real Madrid Oo Looga Shakisan Yahay Caabuqa Korona & Go’aanka Zinedine Zidane - Gool24.Net
Xiddig Ka Tirsan Real Madrid Oo Looga Shakisan Yahay Caabuqa Korona & Go’aanka Zinedine Zidane
Weeraryahanka reer Serbia ee Luka Jovic ayaa laga reebay liiska ciyaartoyda Real Madrid ee caawa la ciyaaraysa Granada si la mid ah kulankii Alaves, kaddib markii looga shakiyey inuu ku dhacay caabuqa Korona.
Luka Jovic ayaa booqday qof ay saaxiibo yihiin oo uu ku dhacay xanuunkani, waxaanay kooxdu gelisay karantiil iyadoo loo qoondeeyey saddex baadhitaan oo kala dambeeya oo lagu hubinayo caafimaadkiisa ka hor inta aan loo ogolaan inuu soo dhex galo ciyaartoyda kooxda.
Baadhitaankii u horreeyey ee lagu sameeyey ayaa muujiyey in uu badqab ka yahay caabuqa, laakiin laguma go’aan qaadan maadaama uu jidhku qarsan karayo fayraska inta hore.
Baadhitaan labaad oo lagu sameeyey ayaa sidoo kale la sheegay in aan waxba lagaga helin, hase yeeshee waxa haddana la marinayaa tijaabo saddexaad oo noqonaysa tii ugu dambaysay.
Isniinta ama Salaasada ayaa loo qorsheeyey baadhitaanka saddexaad, waxaana haddii lagaga waayo fayraska loo ogolaan doonaa inuu isku diyaariyo kulamada kooxdiisa ee soo socda.
Tababare Zidane ayaa la sheegay inuu go’aan ku gaadhay in haddii uu Luka Jovic taam ka noqdo caabuqa inuu ku daro liiska ciyaartoydiisa kulanka Khamiista ee Villarreal, kaas oo noqon kara midka go’aaminaya inay Real Madrid ku guuleysanayso horyaalka LaLiga.
Laacibkan oo xili ciyaareedku ku adkaa, isla amrkaana fursad ka waayay tababare Zinedine Zidane, waxa uu soo dhex dabbaashay mashaqooyin aanay u bogin Los Blancos.
Waqtigii dunidu go’doonka u gashay caabuqa Korona ayuu laacibkani iskaga tegay waddanka Spain iyadoo aan loo ogolayn maadaama ay kooxdu ku jirtay karantiil, ayna jireen shaki ah in qaar ka mid ah xiddigaha kooxdu ay la kulmeen ciyaartoy ka tirsan kooxda Basketball-ka oo laga helay xanuunka.
Markii uu tegay waddanka Serbia ayaa uu u baxay bannaanka iyadoo dalkiisana ay ahayd inuu isku karantiilo, waxaanay taasi keentay in lagu baaqo in xabsiga loo taxaabo. Dadka qaar ayaa markaas ku eedeeyey inuu faafinayo xanuunka, waxaana si cad uga hadashay madaxda waddanka.
Intaas kaddib waxa xigtay in Real Madrid ay ogaatay inuu dhaawac jabniin ah soo gaadhay ciyaartoygan intii go’doonka lagu jiray, taas oo iyaduna dhibaato kale noqotay.